I-United Nations (UN) kudlala indima ebalulekile international siqinise impi yokulwa nenkohlakalo emazweni amaningi omhlaba. Ukuxazulula le nkinga kuba njengoba nezokusigcoba nezinye izinkinga eziningi esiphuthumayo ingaxazululwa ngokuthi lokhu inhlangano yomhlaba wonke. I-UN Convention ngokumelene Ukonakala isinyathelo esilandelayo ekulweni lesi simanga lobugebengu, okuyinto ebambezela ukuthuthukiswa kuncintisana kohlaka emakethe khulula.
Ngo-2003, emzini Merida eMexico aphethwe eliphezulu inkomfa zezombusazwe eNhlangano yeziZwe, esasayinwa iqembu ngowokuqala UN Convention ngokumelene Inkohlakalo ngaphansi kwazo. Lolu suku, Disemba 9 - usuku ekuqaleni inkomfa Mexican - baba esemthethweni Anti-Corruption Day.
Zona-UN Convention ngokumelene Inkohlakalo, lathatha kancane ngaphambili - 31.10.2003. Wenza leso sinqumo ngoba nayiSigungu -UN General Assembly. Iningi uthi bavumelana ngesidingo ukuqashelwa olusemthethweni yenkinga. Ukuxazulula le nkinga kudingeka isinyathelo collective izinyathelo.
I-UN Convention ngokumelene Inkohlakalo sacala kusebenta kuphela ngo-2005 - ngemva kwesikhathi sezinsuku ezingu-90 ngemva ukusayinwa idokhumenti 30 UN oyilungu. Ngeshwa, unikezwa iqiniso lokuthi UN - inhlangano enkulu kwamanye amazwe, izindlela zokuthathwa kwezinqumo abasakwazi kancane nevilaphayo, ngakho ukuqaliswa ngokunenzuzo amalungiselelo amaningi kuthatha izinyanga noma ngisho neminyaka.
Kulo mbhalo, esiphezulu ebekwe ngokuningiliziwe lokho okushiwo yinkulumo inkohlakalo ngamazwe, izici zalo eziyisisekelo. Iphinde ezihlongozwayo izinyathelo eziqondile ukuze silwe yokuqeda inkohlakalo. ochwepheshe UN baye basungula amagama letihlelekile naletingakahleleki bavumelana uhlu izinyathelo ukuthi ngamunye party State EMhlanganweni, iphoqelekile ukuba inikeze ukuze ukuqeda ubukhohlakali.
INgqungquthela icacisa ngokuningiliziwe izimiso umsebenzi izikhulu zikahulumeni banikwa izincomo kwempahla yomphakathi, nokubika kanye nezinye izingqinamba eziningi zokungabi esobala ngaphezulu ubudlelwano, uhulumeni nezinkampani ezizimele.
Ubani usesayine futhi samukelwa
Kuze kube manje, iningi aMalunga eMibuso wajoyina UN Convention ngokumelene Inkohlakalo.
Sinesithakazelo ngokukhethekile ochwepheshe abaningi Isigaba 20 se-UN Convention, amelane nenkohlakalo, okubhekisele nokunonophala obungemthetho izikhulu zikahulumeni. Iqiniso lokuthi akuwona wonke amazwe kwezinkambiso zomthetho yasekhaya nemithetho evumela ukusebenzisa kwezinkambiso kwalesi sihloko.
izinganekwane eziningi uya eRussia mayelana nokuthi kungani Isigaba 20 se-UN Convention ngokumelene Inkohlakalo akusebenzi. Ngokusho abanye abagxeki, senziwa esivuna amaqembu athile ithonya, ongathandanga ukulahlekelwa amandla nokulawula.
Nokho, leli qiniso has a incazelo ezingokomthetho - okuqukethwe kuphambene Isigaba 20 soMthethosisekelo, okubhekisele oyobhekwa. Ngaphezu kwalokho, e-Russia akukho migomo zomthetho ngokuthi "ukuthola ingcebo emthethweni". Konke lokhu ngesikhathi enza kungenzeki ukuba lelisu nezinhlinzeko zalesi sihloko endaweni WaseRussia. Nokho, lokhu akusho ukuthi kuyohlala phakade. Ngaphezu kwalokho, umhlangano ezibekwe Esimweni esinjalo - wonke amalungiselelo womhlangano kufanele sigcwaliswe kuphela uma kukhona izimfanelo ezingokomthetho kanye nangokushaywa kwemithetho.
Inhloso esemqoka ngukuqeda lesi simanga lobugebengu zenkohlakalo, ngoba kuphambene ngokuphelele nemigomo yentsandvo yelinyenti kanye nobudlelwane emakethe khulula, kokubili phakathi States futhi phakathi nezinkampani ngabanye. Inkohlakalo ebambezela ukuthuthukiswa ezindaweni eziningi ngisho uthi.
States abangene ngemvume futhi samukelwa idokhumenti, baye bazinikela ukuhlonza amacala enkohlakalo kanye nempi yokulwa kubo. I-UN Convention kusiza nokubambisana kukazwelonke uzingela amacala enkohlakalo, kokubili emazingeni eemfundeni kanye nephasi loke.
Kuze kube yimanje, njalo eminyakeni 2 wahlela ukuba kube ingqungquthela States Izingxenye UN Convention ngokumelene Inkohlakalo, lapho kukhona olusha ulwazi kwezinyathelo ezathathwa. Abahlanganyeli nixoxe ngendlela eyiyo izincomo, ukuthatha izinqumo ezintsha ekubambisaneni esizayo futhi ozakwethu siqinise impi yokulwa nenkohlakalo. Ngo-2015, i-lengqungquthela eRussia Petersburg.
Knightley Isikhwama: Into esemqoka - isikhathi ndawonye
Amaqembu lwezezimali-zezimboni: Experience Russian
Kungani ubuhlungu imvukuzane